အဆိုပါစက္ကူအထက်တန်းကျောင်းသို့မဟုတ်ကောလိပ်အတွက်ရရှိသောတန်းစီစာရင်းပြုစု. လူအများစုဟာဘွဲ့ရပြီးနောက်သူတို့ကိုအရ. သငျသညျအများအားဖြင့်ကျောင်းအနေဖြင့်ပိုပြီးနိုင်ငံခြားကျမ်းအဘို့တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်.
ကျောင်းများအမေရိကန်စနစ်နှင့်တက္ကသိုလ်များကိုအသုံးပြုဖို့ Aatmadia (အကြွေး). ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီအမျိုးအစားသို့မဟုတ်သင်တန်းဖို့တာဝန်ဟာနံပါတ်များကိုဂုဏျ. အများအားဖြင့်, အတနျး 2-3 ခရက်ဒစ်. သငျသညျဘွဲ့ရမီ, သငျသညျအခြို့စုစုပေါင်းခရက်ဒစ်ရရန်ရှိသည်.
ခွဲခြာသို့မဟုတ်သံသရာစက်ဝန်း၏အခွဲခြာ၏အကဲဖြတ်: စာသားမနေထိုင်သူလူအပေါင်းတို့သည်အတန်းတဦးတည်းအားဖြင့်တဦးတည်းယူကြည့်ဖို့နိုင်ငံခြားမိတ္တူကြည့်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်. သငျသညျအမရေိကနျပွညျထောငျစုတှငျလိုအပျနသေူမြားဆင်တူစာသင်ခန်းရာ၌ခန့်ထားပြီလျှင်သူတို့ကတွေ့ချင်ပါတယ်. သငျသညျကောလိပ်မှမိတ်ဆက်ချင်သည့်အခါဤအမှုကိုပြုသောဖြစ်ပါတယ်. အများအားဖြင့်အကြားကုန်ကျ 150 နှင့် 200 ဒေါ်လာစျေး.
ယေဘုယျအားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်: စာသားမနေထိုင်သူငါမူရင်းသင့်ရဲ့တိုင်းပြည်ကနေရတယ်ဖို့ဒီဂရီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌တူညီသောဒီဂရီလက်မှတ်ရှိမရှိကြည့်ဖို့နိုင်ငံခြားမိတ္တူကြည့်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်. အခါအလုပ်အပေါ်တိုးတက်မှုဤသည်မှာအများအားဖြင့်ပြု. အကြောင်းကိုကုန်ကျ 400 ဒေါ်လာစျေး.
သင်ဆန်းစစ်သုံးသပ်ခြင်း၏ရလဒ်များကိုအကြောင်းကိုရှုပ်ထွေးဖြစ်ကြပြီးသင်ပိုမိုအကူအညီရလိုလျှင်, သင်အကဲဖြတ်ကောက်ယူသောကုမ္ပဏီဆက်သွယ်နိုင်သည်. သင်တို့သည်လည်းကျောင်းကတိုင်ပင်အင်တာဗျူးနိုင်ပါတယ်. ဒါဟာသင့်ရဲ့အကဲဖြတ်ဖတ်ပါရန်သင့်အားကူညီပေးပါမည်နှငျ့သငျယူအတန်းဖို့လိုအပ်ကြောင်းသင်ပြောပြလိမ့်မယ်.
ပညာပေး Alaatmadion နေထိုင်သူများ
နိုင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Upwardly သငျသညျအမရေိကနျပွညျထောငျစုတပ်ဖွဲ့များအတွက်သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်သင့်ပညာရေးနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလမ်းကြောင်းဟောင်းကအလုပ်လုပ်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ကူညီပါနှင့်အလုပ်ရှင်များအဘို့အတွေ့အကြုံ၏တန်ဖိုးကိုသရုပ်ပြ.